Xiddigga Ay Real Madrid Iyo Barcelona Sida Tooska Ah Ugu…
Real Madrid iyo Barcelona ayaa dagaal toos ah isku caddaysan doona marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga, waxaanay ku hirdami doonaan AxadleTM labadoodaba lala xidhiidhinayo oo doonaya inuu diga-rogosho ka sameeyo naadigii uu cirmigiisa ciyaareed oo dhan usoo dheelayay.
Sida uu qoray wargeyska Sports Bild ee kasoo baxa Jarmalka, difaaca bidix ee Baeyrn Munich ee David Alaba ayaa dagaal fool ka fool ah iskaga horkeeni doona Real Madrid iyo Barcelona oo marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoygu xagaagan saxeexiisa ku loollami doona.
Xiddigan reer Austria oo Bayern Munich u ciyaarayay tan iyo sannadkii 2008, waxay hadda da’diisu tahay 27 sannadood, waxaanu go’aanka mustaqbalkiisa la wadaagay masuuliyiinta kooxdiisa oo uu u sheegay rabitaankiisa ah inuu iskaga tegayo Bundesliga, waxaana markiiba ay kooxdaasi beddelkiisa u diyaarsatay Alphonso Davies.
Laacibkan oo sidoo kale lala xidhiidhinayo Manchester City oo saluugsan Benjamin Mendy oo dhaawacyo iyo bandhig hooseeya ku qaatay Etihad, hirdankiisa loo badinayaa inuu dhexmari doono labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona.
Tababare Zinedine Zidane oo ogsoon in tamartii Marcelo is dhintay, sidoo kalena saluug kaga jiro Ferland Mendy oo uu rumaysan yahay in masuuliyadda difaaca bidix oo dhan aan dusha laga saari karin, waxa uu door bidayaa inuu keeno Alaba, isla markaana heshiiska amaahda ee Sergio Reguiolon uu ku joogo Sevilla loosii kordhiyo, si uu khibrad badan iyo waayo aragnimo badan usoo helo ka hor inta aanu imanin Santiago Bernabeu.
Sidaas oo kale, Barcelona oo uu hawl-gab kaga dhow yahay Jordi Alba oo ay da’diisu tahay 31 jir, waxay beddelkiisa u haystaan kaliya Junior Firpo oo xili ciyaareedkan Camp Nou yimid, hase yeeshee aan wali muujinin karti uu masuuliyaddaas ku qaadi karo, waxaana tababare Quique Setien uu doonayaa in Alaba uu noqdo xiddiga booskaas sida rasmiga ah uga dhaxla Alba.
jojo 683 posts